कसरी कन्जुगेट "ट्र्रावर्सर" (क्रस) फ्रान्सेलीमा
"ट्रान्सरर" को आधारभूत बिरुद्धमा एक द्रुत पाठ
फ्रांसीसी क्रिया ट्रान्सरर मतलब "क्रूस गर्न" को रूप मा केहि को रूप मा उल्लेखित छ। यसले यसलाई सम्झना गराउन सजिलो बनाउँछ, यद्यपि तपाइँलाई थाहा छ कि कसरी क्रियाकलाप गर्न को लागी । एउटा छोटो पाठले तपाईंलाई आधारभूत conjugations मा परिचय दिनेछ ताकि तपाईं "I crossed" जस्तै "" क्रस गर्दै हुनुहुन्छ "भन्नु फ्रांसीसीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
ट्रान्सरर को आधारभूत संचलन
अन्य क्रियाकलापको अध्ययन गर्ने फ्रान्सेली विद्यार्थीहरूले ट्रान्सररको लागि प्रयोग हुने ट्राभेसन ढाँचाहरू पहिचान गर्नेछन्।
यो कारणले यो एक नियमित - एर क्रिया हो , अर्थले यो फ्रान्सेली भाषामा पाइने सबैभन्दा सामान्य ढाँचा पछ्याउँछ। यदि तपाईंले पेन्सर ( जस्तै सोच्नु) वा पोटर जस्ता शब्दहरू पढ्नु भएको छ भने, यहाँ प्रयोग हुने अनौठो समापन परिचित हुनेछ।
सबै भन्दा साधारण conjugations वर्तमान, भविष्य, र असामान्य अतीत को लागि आवश्यक मूड हो। चार्ट प्रयोग गर्दै, विषय उपन्याससँग विषय विषयको लागि उपयुक्त तनावसँग मेल खाने सही कन्जगरेसन पत्ता लगाउनुहोस्। यसले तपाईंलाई बताउनेछ कि कुन अन्त्यमा ट्र्याक्टरको स्टिममा थपिएको छ। उदाहरणका लागि, "म क्रस गर्दैछु" जे छ, र हामी "पार गर " अचम्म लागेका छ
उल्टो traverserai traversais
उल्टो traversera traversait
traversons ट्रेलररनहरू traversions
ट्राफिकन्ट traverseront traversaient
ट्रान्सरर को वर्तमान भागिक
ट्रान्सररको स्टेममा एन्ट - एन्ट एन्टिटी थप्नाले तपाईंलाई ट्रान्सफरन्टको वर्तमान भाग दिन्छ।
कम्पाउन्ड अतीत तनाव मा ट्रान्सरर
Passé Composos एक यौगिक भूतपूर्व तनाव हो जुन प्राय: फ्रान्सेलीमा प्रयोग गरिन्छ र तपाईले असम्भव भन्दा सजिलो भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। यो कारणले गर्दा तपाई केवल सहायक क्रिया avoir को वर्तमान विषय मा विषय संग मेल खाने को लागी जरूरी छ , त्यस पछि पहिले सहभागिता traversé मा संलग्न गर्नुहोस।
निर्माण सजिलो छ। उदाहरणका लागि, "म पार गर " जेआईई ट्रावर्से हो र "हामी क्रस" हौं । यद्यपि हालैको अवधिमा एवोयर छ, अघिल्लो सहभागिताले कारवाही अघि बढेको छ भनेर व्याख्या गर्दछ।
ट्रान्सररको अधिक सरल कन्जग्युसन
ट्रान्सररको धेरै अन्य conjugations छन् र प्रत्येकसँग एक फरक उद्देश्य छ, तर हामी यस पाठको लागि अनिवार्य संग रहन जाँदैछौं। जब तपाईं आफ्नो शब्दावली विस्तार गर्नुहुन्छ, तपाईले चाहानुहुन्छ कि क्रस गर्ने कार्य हुनसक्छ वा हुन सक्दैन। त्यस अवस्थामा, तपाइँ उपन्यासक प्रयोग गर्नुहुनेछ। यदि, तथापि, अरू कसैलाई नभएसम्म क्रसिंग हुने छैन, तपाईं सशर्तिक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
दुर्लभ अवसरहरूमा, तपाईं पासे सरल वा असामान्य उपस्थितिको सामना गर्न सक्नुहुनेछ। जब तिनीहरू तपाईंको फ्रेन्च शब्दावलीमा आवश्यक अवधारणाहरू छैनन्, तिनीहरू जान्न राम्रो छन्।
उल्टो traverserais traversai traversasse
उल्टो traverserait traversa traversât
traversions traverserions traversâmes ट्रान्सफेरेसन
ट्राफिकन्ट traverseraient traversèrent पारदर्शी
मानौं कि तपाइँ "क्रस!" लाई कसैलाई बताउन आवश्यक छ। आपातकालीन वा केही अन्य अवस्थामा जुन छिटो, छोटो आदेश आवश्यक छ।
यी उदाहरणहरुमा, तपाईं ट्रान्सरर को जरूरी रूप मा बदल सकते हो। जब प्रयोग गरेर, विषय सर्वनाम छोड्नुहोस् र बस भन्नुहोस्, " ट्राउन्डर!"
फ्रान्सेली पात्रो: बोल्दै दिन, हप्ता, महिना र मौसम
'Avoir': कसरी यो कन्फुगेट गर्न सकिन्छ यो प्रमुख फ्रांसीसी शब्द
ESL शब्दावली पाठ योजना - प्रारम्भ स्तर स्तर शिक्षाका लागि विपक्षी
बोटका साथ फ्रान्सेली अभिव्यक्तिहरू
स्पेनिश मा पनि 'पनि'
चीनीमा "सुप्रभात" र "शुभ साँझ" कसरी भन्न सकिन्छ
स्पेनिश शब्द 'Saber' र 'Conocer' बीचको भिन्नता थाहा छ
विद्यार्थीहरूको लागि नोनोमिक उपकरण
आधारभूत पोकर बताउँछ
Papermaking को इतिहास
पाठक आधारित नर्स
समकालीन रक को 15 सर्वश्रेष्ठ प्यार गीत
सोनेट कसरी विश्लेषण गर्ने?
टर्नडोडोले के गर्छ?
के नाइट्रू आर सी कार र नाइट्रो एयरप्लेसहरू समान नाइट्र ईन्धन प्रयोग गर्छन्?
Polystyrene र स्ट्रोरोफोम को आविष्कार
जापानी भाषामा 'डिजौबु' भनेको के हो?
के हामीले AD या CE प्रयोग गर्नुपर्दछ?
रोमन सम्राटहरूको पहुँचमा उमेर
प्रजाति प्रोफाइल: थ्रेडफिन छाया
कसले शौचालयलाई इन्कार गर्नुभयो?
केट डिक्यामिलो द्वारा डेस्पेरेअक्स को कथा
युद्ध को 1812 101: एक अवलोकन